Shop Cares | Shop.com.mm - Online Shopping in Myanmar
တခြားသူတွေအပေါ် ကောင်းကျိုးပြုခြင်းဆိုတာ သင်ဘယ်တော့မှ မဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Henry David Thoreau
တစ်ပါးသူကို မြှင့်တင်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တိုးတက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Robert Ingersoll
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ကူညီဖေးမမှုမရှိရင် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အသိုက်အဝန်းဆိုတာ အဓိပ္ပာယ်မရှိနိုင်ပါ။ Anthony J. D'Angelo
SHOP CARES ဆိုတာဘာလဲ ?
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာ အကျိုးအမြတ်တစ်ခုတည်းကိုသာကြည့်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးမပြုနိုင်ပါက ရေရှည်မတည်တံ့နိုင်ဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ စီးပွားရေးက တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှု ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်စေရန် ကျွန်တော်တို့ Shop.com.mm မှ ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်း E-commerce ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ Shop.com.mm ဟာ နိုင်ငံတွင်း အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ နေရာတွေဆီကို ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေရောက်ဖို့အတွက် သင်တို့နဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အသင့်ရှိနေပါတယ်။ Shop.com.mm online shopping ကုမ္ပဏီကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးအွန်လိုင်းရှော့ပင်းဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့သာမက လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ပါ အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။
မြန်မာလူငယ်တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ပိုမိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း
ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေဟာ အနာဂတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Shop.com.mm က လူငယ်တွေအနေနဲ့ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို သင်ယူလေ့လာနိုင်ပြီး ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့ နယ်ပယ်ကဏ္ဍမှာ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြစ်သွားစေဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ကာ လူငယ်တွေရဲ့ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်တွေကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။
Anne Frank ရဲ့ ဆိုရိုးစကားအတိုင်း ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲသွားသူဆိုတာမရှိပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းမှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ပေးကမ်းကူညီဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတွေကို တည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂ရက်နေ့တွင် Shop.com.mm ရဲ့ ၃နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နဲ့ သီတင်းကျွတ်အလှူအဖြစ် ရန်ကုန်မြို့ရှိ နှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာသို့သွားကာ နေ့လည်စာနဲ့ အလှူငွေ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
No. 82-C, Thar Tha Nar Yeik Thar Street; Middle Shwe Gone Taing Ward